ဥရောပခရီးစဉ် | မိုးစက်မှော်
Filed under: ခရီးသွား, အတွေ့အကြုံ —2Comments	10/04/2010
လန်ဒန်တွင် အလုပ်လာလုပ်ရင်း ၈ လ ပြည့်ခါနီးတွင် ပထမဆုံး အားလပ်ရက်များအဖြစ် တစ်လကြာ ရလေတော့တယ်။ မူလကတည်းက ဥရောပသွားဖို့ ရည်မှန်းထားသူပီပီ အားလပ်ရက်တွေ ရတဲ့ကာလအတွင်းမှာ နဂိုစိတ်ကူးကလေးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်။ အဓိက ကတော့ ဗီဇာရဖို့ပေါ့လေ။ ယူကေဗီဇာရထားပေမဲ့ ဥရောပ(အီးယူ)နိုင်ငံတွေ ထပ်သွားချင်ရင်တော့ ရှန်ဂန်(Schengen Visa)ဗီဇာကို ယူရပါတယ်။ ရှန်ဂန်ဗီဇာပေးနိုင်တဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ လန်ဒန်အခြေစိုက် သံရုံးကမဆို ဗီဇာယူလိုက်ရင် ရှန်ဂန်ဗီဇာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို သွားလာလို့ရပါတယ်။ ရှန်ဂန်ဗီဇာရရင် သွားနိုင်တဲ့ ဥရောပက နိုင်ငံတွေကတော့…
သူငယ်ချင်းကလည်း ပြောတယ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံသွားဖြစ်ရင် မြို့တော် ဘရပ်ဆဲလ်ပြီးရင် အဲဒီက ဒုတိယမြို့ဖြစ်တဲ့ Antwerp ကို သွားဖို့၊ စိန်တန်းကို ကြည့်ဖို့ ပြောပြန်တယ်။ ၀ယ်တာ မ၀ယ်တာ နောက်ထား၊ ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် သွားမှာပါလို့ စိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ မြို့တော် ဘရပ်ဆဲလ်ကလည်း မသွားလို့ မဖြစ်ဘူးလေ၊ ဥရောပပါလီမန်အခြေစိုက်ထားတာကိုး…၊ တစ်ခါ ကိုယ်က ပါလီမန်တို့၊ လွှတ်တော်တို့ဆို ငယ်ငယ်ကထဲက သိပ်ရောက်ဖူးချင်တာ။ ရန်ကုန်မှာတော့ ပြည်လမ်းက ဖြတ်ရတိုင်း တံခါးပိတ်သော့ခတ်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ဖြူဖြူကြီးကို အပြင်ကပဲ ငေးငေးကြည့်ခဲ့ရတာကိုး၊ တစ်ခါမှလည်း အထဲမ၀င်ခဲ့ဖူးပါ။ ညီကတောင် လူရွှင်တော်ဖြစ်တုန်းက တစ်ခါလား မင်းပွဲသဘင် သွားကဖူးလို့ ရောက်ဖူးသေးတယ်ပြောတာပဲ။
နံနက် ၈ နာရီမှ ဗီဇာလက်ခံတဲ့ရုံးဖွင့်တာဆိုပေမဲ့ စောစောတန်းစီဖို့စိတ်ကူးနဲ့ ၆ နာရီခွဲလောက် လာခဲ့တာတောင် ကိုယ့်ရှေ့မှာက ၃ ယောက် ရောက်နေပါပြီ။ တစ်နာရီခွဲကြာ ချမ်းချမ်းစီးစီး လေတွေတိုက်နေတဲ့လမ်းမပေါ် စောင့်ပြီးတဲ့အခါ အဆောက်အဦးထဲ ၀င်ရပါတယ်။ တန်းစီနေရင်း ကိုယ့်နောက်က အိန္ဒိယက ကုလားမလေးက “မင်းကွာ၊ မြန်မြန်လိုချင်ရင် ဂျာမနီသံရုံးသွားလျှောက်လည်း ရတာပါပဲ“လို့ ပြောပါတယ်။ ကိုယ်က သူ့ကို ပြောမိတာကိုး “ငါ တကယ် သွားချင်တာက ပါရီကွ၊ အခုက ပြင်သစ်သံရုံးက ကြာမှာမို့ မြန်မြန်ရမဲ့ ဒီသံရုံးမှာ ဗီဇာလာလျှောက်တာပါ“လို့ သူ့ကို ပြောလိုက်တာကိုး။ သူကတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံကို ကျောင်းကနေခွင့်ယူပြီး သွားမှာတဲ့။ လန်ဒန်မှာကျောင်းလာတက်တဲ့သူတွေက ဥရောပလို ဒီလိုပဲ အလည်သွားတတ်ကြတယ်၊ ကျောင်းကတော့ ထောက်ခံစာယူခဲ့ရတာပေါ့လေ။
ဗီဇာလျှောက်လွှာတင်ရမဲ့ အဆောက်အဦးအပေါက်ဝရောက်တော့ အပေါက်ဝမှာ အစောင့်(Guard) က မေးသေးတာ၊ မင်းက ဘာဗီဇာလျှောက်မှာလဲတဲ့၊ ဘယ်မလဲ ကြိုတင်ချိန်းဆိုထားတဲ့စာ(Appointment)တဲ့၊ “ဟာကွာ…မင်းပဲ မနေ့က ဒီမနက် လာတင်လို့ ပြောထားပြီးတော့“လို့ဆိုတော့ “မင်းက ဘယ်လ်ဂျီယံဗီဇာ လျှောက်မှာလား“တဲ့။ “ဟုတ်တယ်လေကွာ၊ ဒီမှာ လက်မှတ်နဲ့ ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်“ဆိုမှ အစောင့်က ပေးဝင်တာဗျ။ အခုပြောပြနေတာက ပိုက်ဆံလည်းရှိတယ်၊ ခွင့်လည်း ရထားတယ်ဆိုတာတောင်မှ ဗီဇာလျှောက်ရ ပြင်ရဆင်ရ မလွယ်တာကို ပြောပြနေတာပါ။ နောက်တစ်ခု ကိုယ့်တိုင်းပြည်က မချမ်းသာဘူး၊ အဲဒီက အစိုးရက မကောင်းဘူး(ဒါမှမဟုတ် မကောင်းသတင်းတွေ တအားထွက်နေတယ်)ဆိုရင် အဲဒီတိုင်းသူပြည်သား လူအများတို့မှာ အလွန်နစ်နာပါကလားလို့ စိတ်ထဲမှာတောင် ယောင်တောင်တောင်နဲ့ တွေးမိပါသေးတယ်။
02/05/2010 at 6:27 am	ကိုယ့်နိုင်ငံသာ ချမ်းသာ နာမည်ကောင်းနေမယ်ဆိုရင် ရှယ်ပဲပေ့ါ။
26/12/2010 at 5:09 pm	Once UponaTime, our county hasagood image .. We have history.
I am very proud to be Myanmar. Except that stupid gov..
« ၁၀ ပေ ပတ်လည်ထဲမှာ